Kedu ihe bụ igodo Shift na gịnị bụ maka ya? | Nzukọ mkpanaaka
Kedu ihe bụ igodo Shift na gịnị bụ maka ya?
Edere Ferreno | 16/11/2021 12:52 | Sistemụ arụmọrụ
Kwa ụbọchị, anyị na-eji ahụigodo nke kọmpụta anyị, ma ọ bụ desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ. Ahụigodo QWERTY nwere ọtụtụ igodo pụrụ iche, nke na-enye anyị ọrụ ụfọdụ na kọmpụta. Otu n'ime igodo ndị a anyị nwere ike ịtụle pụrụ iche ma ọ bụ dị iche bụ igodo ngbanwe. Ọ bụ mkpịsị ugodi ọtụtụ nde mmadụ na-eji kwa ụbọchị na kọmpụta ha, ma na ọtụtụ ndị amaghị ihe ọ bụ ma ọ bụ ihe eji ya eme.
Ọzọ anyị ga-agwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma maka igodo shift na ahụigodo site na kọmputa anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere igodo a, mmalite ya na ihe enwere ike iji ya na PC, anyị na-ahapụ gị ozi a niile n'okpuru. Ọ nwere ike inyere gị aka ịmatakwu gbasara igodo a.
1 Kedu ihe bụ igodo Shift
2 Ebe dị na ahụigodo
3 Gịnị bụ igodo a maka
3.1 Ngwa ndị ọzọ
4 Ngwakọta igodo shift
Kedu ihe bụ igodo Shift
Igodo Shift, nke a makwaara dị ka igodo shift, ọ bụ igodo mgbanwe na kọmpụta. A na-anọchi anya igodo a na ahụigodo site na akara akụ elu. Ọ bụ igodo dabara n'ụdị nke a na-akpọ igodo mgbanwe, nke bụ igodo pụrụ iche, nke mgbe ejiri igodo ọzọ pịa ya na kiiboodu, ga-eme ihe pụrụ iche.
Aha igodo a sitere na typewriter ochie. Ebe ọ bụ na n'ụdị typewriter ị ga-ejide mkpịsị ugodi ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị nwee ike dee agwa ma ọ bụ akara nke ụfọdụ igodo nwere ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ide akwụkwọ ozi a pịara n'oge ahụ na mkpụrụedemede ukwu. Okwu Shift pụtakwara mgbanwe n'asụsụ bekee, nke bụ kpọmkwem ihe mere site na ịpị ya mgbe a na-ede ihe.
Kọmputa nke oge a, dị ka ọ dị na typewriter n'oge gara aga. nwere igodo abụọ nke ụdị a. Enwere igodo mgbanwe n'akụkụ ọ bụla nke ahụigodo, n'agbanyeghị ụdị ahụigodo ị nwere. Ma ọ bụla ahụigodo nkịtị, kọmpat, ụdị TKL ma ọ bụ n'agbanyeghị asụsụ a na-ahụ ahụigodo ahụ (dabere na obodo ebe erere PC). N'ime ha niile anyị ga-achọpụta na e nwere igodo abụọ nke ụdị a na ya.
Ebe dị na ahụigodo
Igodo mgbanwe dị na mmalite na njedebe nke igodo nke abụọ, ma ọ bụrụ na anyị na-amalite na ala nke ahụigodo. Nke mbụ dị n'akụkụ aka ekpe nke ahụigodo dị n'okpuru igodo mkpọchi Caps. N'aka nri ọ dị n'okpuru igodo Tinye na mkpụrụedemede nke agwa Ç. Naanị n'elu igodo Shift dị n'aka ekpe nke ahụigodo anyị na-ahụ igodo mkpọchi isi obodo. Nke dị n'aka nri nwere ike ịnwe ebe dịtụ iche, ebe ọ bụ ihe ga-adabere n'ụdị ahụigodo anyị nwere (ọ bụ keyboard zuru oke, laptọọpụ ma ọ bụ kọmpat, dịka ọmụmaatụ).
N'ọnọdụ ị nwere kọmpat kiiboodu ma ọ bụ laptọọpụ, igodo Shift aka nri dị n'ọnọdụ ụfọdụ dị n'elu igodo akụ. Ọ bụrụ na ị nwere ahụigodo zuru oke na nke a, mgbe ahụ enwere ike ịhụ igodo ahụ n'elu igodo njikwa aka nri. Nke na-adịghị agbanwe ọnọdụ ya bụ igodo aka ekpe, nke ga-adị mgbe niile na ebe anyị kwuru, n'agbanyeghị ụdị ahụigodo ị nwere.
A na-eji otu akara akụ elu na-anọchi anya igodo abụọ a mgbe niile. Yabụ na anyị ga-achọta akara ngosi ahụ na ahụigodo, ka anyị nwee ike mata igodo Shift na ya ngwa ngwa. Ọ baghị uru ụdị ahụigodo ma ọ bụ asụsụ ọ nọ na ya, a na-eji otu akara ngosi ahụ mgbe niile na-anọchi anya igodo a.
Gịnị bụ igodo a maka
Isi ebumnuche nke igodo ngbanwe na kọmpụta anyị bụ ka nwee ike dee mkpụrụedemede ukwu nke akwụkwọ ozi ahụ nke anyị kụgidere n'oge ahụ. Ya bụ, mgbe ịpị igodo a na mkpụrụedemede ọ bụla dị na kiiboodu n'otu oge, anyị ga-ahụ na na ihuenyo ka a ga-egosipụta mkpụrụedemede ahụ na mkpụrụedemede ukwu. Nke a bụ ihe ga-arụ ọrụ na mkpụrụedemede ọ bụla na ahụigodo. Ya mere, anyị agaghị enwe nsogbu na nke a.
Ọ bụrụ na kọmputa anyị, anyị nwere mkpọchi mkpuchi na-arụ ọrụ n'oge ahụ, nke dị n'elu igodo ngbanwe dị n'aka ekpe nke ahụigodo, mgbe ahụ igodo na-akpa àgwà na-abụghị ụzọ ruo nke gara aga. Ya bụ, ọ bụrụ na anyị pịa leta ka anyị na-pịa igodo mgbanwe a n'otu oge, mgbe ahụ, a ga-egosipụta ya na obere obere na ihuenyo. Ọ bụrụhaala na agbanyere mkpọchi mkpuchi ahụ.
Na mgbakwunye na nhọrọ a, igodo ngbanwe a nwekwara ebumnuche ndị ọzọ. Ebe ọ bụkwa igodo nke a ga-eji dee agwa dị n'elu ọnụọgụ ma ọ bụ agwa dị n'elu igodo ndị ederelarị na agwa. Ya bụ, ọ bụrụ na anyị pịa igodo a wee pịa nọmba 4 na keyboard, na ihuenyo anyị ga-enwe ike ịhụ na akara dollar ($) pụtara. Otu ihe ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na ịpị igodo ndị ọzọ, dị ka 5 ma ọ bụ 6, nke ga-egosikwa akara ha kwekọrọ. Ọ bụ ezie na anyị nwere mkpọchi mkpuchi na-arụ ọrụ na ahụigodo, ọ bụrụ na anyị pịa nke ọ bụla n'ime igodo ndị a, a ga-egosipụta akara ndị ọzọ, mgbe niile na mgbe anyị pịa shift n'otu oge.
Ndị anyị kwuru okwu ya bụ isi ọrụ igodo mgbanwe na kọmpụta anyị. Nke bụ eziokwu bụ na nke a bụ isi ihe nwere ọtụtụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ, na mgbakwunye na ndị dị n'elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ mkpịsị ugodi anyị nwere ike jiri ọtụtụ oge mee ụzọ mkpirisi dị iche iche ahụigodo nke ga-enyere anyị aka ime omume n'ụzọ dị ngwa. Emere ụzọ mkpirisi ndị a yana igodo ndị ọzọ dị na ya. A na-egosi ya dị ka nhọrọ bara uru mgbe ị na-eji kiiboodu kwa ụbọchị, ebe ọ ga-enye anyị ohere ịme ọtụtụ omume dị iche iche na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ibudata mmemme ga-enyere anyị aka ịmepụta njikọ igodo mgbanwe nke onwe anyị, si otú a na-eme ka ụzọ mkpirisi dị mfe ma dị mma maka anyị, dịka ọmụmaatụ, na-enye anyị ohere ịnweta ihe ndị ọzọ na igodo a na kọmputa.
Ọzọkwa, ọrụ ọzọ nke igodo ngbanwe bụ ịgbanwe igodo ọrụ. Ebe ọ bụ na n'ime ahụigodo arụpụtara taa, anyị nwere naanị F12 n'ihe gbasara igodo ọrụ, ọ bụrụ na anyị pịa Shift + F1, anyị nwere ike nweta F13 na ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, a na-akwụ ụgwọ enweghị igodo ọrụ ndị ọzọ na ahụigodo n'ụzọ dị mfe n'ezie mgbe niile.
N'ikpeazụ, a na-eji igodo a họrọ ngọngọ nke ederede ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ n'otu oge ahụ. Ọ bụrụ na anyị pịa faịlụ ka ị na-pịa igodo Shift, anyị nwekwara ike họrọ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume + ịgbanwee pịa faịlụ gaa n'ihu ala iji họrọ ndị etiti niile, dịka ọmụmaatụ. Na nchịkọta akụkọ ederede, a na-ahapụ anyị ka ịpịa + shift, nke mere na a ga-ahọrọ ederede niile sitere na cursor ruo ebe anyị pịa.
Ngwakọta igodo shift
Dị ka anyị kwuru na ngalaba nke mbụ. igodo a na-enye nchikota dị iche iche nke na-enye anyị ohere ịme ụzọ mkpirisi ma ọ bụ ụfọdụ omume n'ụzọ dị ngwa na kọmputa anyị. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike ịmaghị nchikota ndị a, yabụ na ha ga-enyere gị aka n'okwu gị. Ụfọdụ nchikota anyị nwere ike iji taa nke gụnyere igodo ngbanwe nke kọmputa anyị bụ ndị a:
[merie] + [Mgbanwe] + [↑] Na-agbasawanye windo anyị nọ na elu zuru oke nke ihuenyo, ebe obosara nke windo na-agbanweghị.
[mmeri] + [Shift] + [↓] Na-ewetu mpio dị ugbu a ka ọ bụrụ akara na ogwe ọrụ.
[merie] + [Shift] + [→] Na-ebuga windo na ihuenyo site n'aka ekpe gaa n'aka nri na-agbanweghị ọnọdụ ya n'akụkụ akụkụ ihuenyo ahụ.
[merie] + [Mgbanwe] + [←] Na-atụgharị mpio na ihuenyo site n'aka nri gaa n'aka ekpe na-agbanweghị ọnọdụ ma ọ bụ nha.
[mmeri] + [Shift] + [S] Were nseta ihuenyo.
[Ctrl] + [Shift] + [Esc] Onye njikwa ọrụ na-emepe na Windows.
[Shift] + pịa mmemme site na menu mmalite ma ọ bụ taskbar Mepee ihe atụ ọzọ nke mmemme ahụ ị mepere ugbu a.
[Ctrl] + [Shift] + pịa mmemme site na menu mmalite ma ọ bụ taskbar Gbaa mmemme mepere emepe ugbu a dị ka onye nchịkwa.
[Mgbanwe] + [F10] Nchịkọta ihe ndị gbara ya gburugburu nke ihe ahọpụtara ga-emepe.
[Mgbanwe] + [Fanye] Tapawa na klipbọọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Kedu ihe bụ igodo Shift na gịnị bụ maka ya?
Otu esi eji Netflix VR na kedu ihe ị ga-ahụ?